Farmaajo iyo Khayre taariikh madow ayay u horseedeen dalka iyo dadka Soomaaliyeed! – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Farmaajo iyo Khayre taariikh madow ayay u horseedeen dalka iyo dadka Soomaaliyeed!
Sidoo kale Masar waxay door muhiim ah ku lahayd in Soomaaliya laga difaaco dagaalkii Itoobiya ku soo qaaday sanadkii 1964kii, hubkii ciidamada qalabka sida xilligaas ku dagaal galeena waxa laga keenay dowlada Masar ka hor intaan Ruushka iyo Jarmalka hub laga helin. Sidaas daraadeed nagama mudna walaalaheen inaan maanta ugu abaal gudno inaan Itoobiya kala jirsano.
Madaxweyne iska sax mashruuca Baxnaano cida lacagta bixisey